Miady amin'ny mpamorona Super Mario Run Miyamoto momba ny fiasana amin'ny Apple | Vaovao IPhone
Araka ny efa fantatry ny maro an'isa aminareo rehetra, ny alakamisy ho avy izao dia ho tonga amin'ny fitaovana iPhone ireo lalao nandrasana hatry ny ela Super Mario Run, ary na dia misy fisalasalana aza ny amin'ny mety hisian'io andro io manerantany, dia mandeha hatrany ny milina fanaovana dokam-barotra, ary vao mainka mampirongatra ny faniriana fa efa maro ny mpampiasa no manana azy io.
Shigeru Miyamoto, mpamorona an'i Mario, dia nanolotra a resadresaka ho an'i Glixel izay niresahany ny momba ny hoe niara-niasa akaiky tamin'i Apple nandritra ny fizotran'ny famoronana Super Mario Run ho an'ny iOS.
1 Super Mario Run, na ny fitoviana misy eo amin'ny Apple sy Nintendo
2 Apple sy Nintendo dia mitaona ny fitaovam-piadiany
3 Miverina amin'ny fototry ny fahatsorana
Super Mario Run, na ny fitoviana misy eo amin'ny Apple sy Nintendo
Mandritra ny fotoana ela, Nintendo dia noheverina ho toy ny orinasa mitovy amin'ny Apple amin'ny lafiny sasany, ary izany no nambaran'i Miyamoto nandritra ny tafatafa. Ireo orinasa roa ireo dia efa ela no nametrahana fanontaniana raha ny amin'ny fizotran'ny famoronana. Raha tokony hamorona vokatra mifototra amin'ny zavatra heverin'izy ireo fa tian'ny mpanjifa mifototra amin'ny vondrona fianarana sy asa hafa, mamorona vokatra tian'ny mpanjifa satria ny vokatra mihitsy no tena tsara:
Tena mahafinaritra ahy kokoa ny mahita raha tena namidy tokoa ny nataoko. Raha tokony hiezaka hamorona zavatra heveriko fa ho tian'ny olon-kafa aho dia manohy manao zavatra tiako ary avy eo mijery raha misy olon-kafa tia azy.
Mazava fa ny fitsidihan'ny besinimaro farany izay nataon'i Shigeru Miyamoto dia natosiky ny famotsorana tsy ho ela ny Super Mario Run, ary zava-misy ifandraisany lehibe satria momba ny Ny fitsangatsanganana voalohany nataon'i Nintendo ho lasa sehatra finday tsy voafehin'i Nintendo tenany. Ny zava-misy fa ity anaram-boninahitra voalohany ity dia kintana inona, angamba, no mpilalao horonantsary malaza indrindra amin'ny tantara, dia vao mainka manome fanantenana lehibe kokoa.
Apple sy Nintendo dia mitaona ny fitaovam-piadiany
Zava-dehibe tokoa ity hetsika ity fa ny orinasa roa, Apple sy Nintendo, dia mamoaka ny fitaovam-piadiana varotra rehetra ho an'io fotoana io. ny Miyamoto dia nanan-kaja tamin'ny minitra nandritra ny hetsika fampisehoana ny iPhone 7 Apple, mikarakara ny fanambarana ny Super Mario Run, ary nandany fotoana be aza avy amin'ny keynote mba hampisehoana ny lalao.
Amin'ny lafiny iray dia nanao toy izany koa i Apple, nametraka sora-baventy tao amin'ny App Store nandritra ny volana maro talohan'ny fanombohana mba hampiroboroboana ny lohateny, ary mamela ny mpampiasa hisoratra anarana hampandrenesina rehefa misy izy io, toy ny hoe adinon'izy ireo. SAINGY Sambany eo amin'ny tantara no anaovan'i Apple izany.
Saingy tsy izany ihany. Tamin'ny herinandro lasa teo i Miyamoto dia niseho tao amin'ny The Tonight Show, izay nampiantrano an'i Jimmy Kimmel, nilalao Super Mario Run. Seho fampahafantarana iray. Taorian'izay dia namoaka fampisehoana demo an'ny Super Mario Run tao amin'ny fivarotany nasionaly i Apple.
Fantatr'ireo orinasa roa ireo fa manan-tantara ity fiaraha-miasa ity, ary noho izany dia ezahin'izy ireo hampiroborobo azy ara-dalàna. Miyamoto mihitsy no mamaritra ny fitoviana misy eo amin'ny Apple sy Nintendo:
Angamba ny zavatra mora entina manamarika dia ny Apple, toa an'i Nintendo, dia orinasa mieritreritra ny fomba hampiasan'ny olona ny vokariny. Izahay dia mamolavola zavatra azo ampiasain'ny olona maro dia maro. Nametraka ezaka betsaka tamin'ny interface izy ireo ary nanamora ny fampiasana ny vokatra, ary tena mifanaraka amin'ny Nintendo izany.
Miverina amin'ny fototry ny fahatsorana
Raha ny amin'ny fahatsorana, Nintendo dia te hiverina amin'ny fakany tsotra an'i Mario:
Raha vao nanao Super Mario Bros izahay 30 taona lasa izay, mazava ho azy fa maro ny olona no nilalao an'io, ary anisan'ny antony ny tian'izy ireo fa ny hany tokony hataon'izy ireo dia ny mifindra miankavanana ary mitsambikina. Tsotra be ilay izy. Ny lalao Mario tsikelikely dia nanjary sarotra kokoa ary sarotra kokoa ho an'ny olona ny mifehy azy ireo ankehitriny. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nanomboka tamin'ny hevitra hoe "ahoana raha nanao lalao Mario izahay izay ny ataonao rehetra dia mitsambikina ary ny zavatra hafa rehetra dia tanterahina ho azy?
Rehefa avy nanapa-kevitra izy fa tsy te hamoaka ny lalao ao anatin'ny raikipohy maimaim-poana hilalao, Nintendo dia namorona hevitra ho an'ny Super Mario Run izay karama, saingy amin'ny fanombohana maimaim-poana ho an'ny asehoy ny fahatsoran'ny lalao iray izay azo lalaovina amin'ny tanana iray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Super Mario Run Mpamorona Miyamoto miresaka momba ny fiaraha-miasa amin'ny Apple
Apple Music sy Spotify dia namorona $ 7000 miliara tao anatin'ny herintaona tao amin'ny indostrian'ny streaming mozika